पोर्न साइटमा सबैभन्दा धेरै सर्च भएकी यी अभिनेत्रीको विवाह प्रिन्स ह्यारीसंग हुदै! - pnpkhabar.com
You are at:Home»हलिवुड/बलिवुड»पोर्न साइटमा सबैभन्दा धेरै सर्च भएकी यी अभिनेत्रीको विवाह प्रिन्स ह्यारीसंग हुदै!
पोर्न साइटमा सबैभन्दा धेरै सर्च भएकी यी अभिनेत्रीको विवाह प्रिन्स ह्यारीसंग हुदै!
By मनिषा थापा on ५ जेष्ठ २०७५, शनिबार ०५:२८ हलिवुड/बलिवुड
एजेन्सी : लण्डनमा पछिल्लो समय हरेक मानिसको मुखमा प्रिन्स ह्यारी र अभिनेत्री मेगन मार्कलको विवाहलाई लिएर चर्चा भईरहेको छ । यो विवाह हुनको लागी मात्र दुई दिन बाकी रहेको छ ।
धेरै महान हस्तिहरु यस विवाहमा उपस्थित हुनेछन् । जब प्रिन्स र मेगनको विवाहको अनाउन्समेन्ट भएको थियो तब देखी मेगनलाई इन्टरनेटमा सर्च गरेर उनको बारेमा हरेक जानकारी जान्नको लागी सबै उत्सुक देखिए। तर अचम्मको कुरा यो छ कि पछिल्लो केही दिन देखी मानिसहरु मेगनको बारेमा एडल्ट साइटमा सर्च गरिरहेका छन् ।
अडल्ट वेबसाइट पोर्नहबको दाबी रहेको छ कि मार्कललाई लिएर इन्टरनेटमा उनको चर्चा बढेको छ । पोर्नहबमा मेगन मार्कलको हट भिडियोहरुलाई लिएर मानिसहरु निकै सर्च गरिरहेका छन् ।
पोर्नहबको अनुसार मेगन मार्कलको एडल्ट भिडियोको सर्च २२०८ प्रतिशतले बढेको छ । उनलाई सबैभन्दा धेरै सर्च अमेरीकामा गरिएको छ । अमेरीकाबाहेक यूके, जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन, र्जेन्टीना, आयरल्यान्डमा मानिसहरु उनको भिडियो सर्च गरिरहेका छन् ।